Wed, Apr 25, 2018 | 08:21:59 NST
संविधान जारी त भयो तर लागु भएको अनुभुति भएन । किन कि नागरिकले संविधान घोषणा गरेपछि राहत होइन सास्ती पाएका छन ।
​सुनिल कौर मेहेता
एकापटटी थरुहट एकापट्टी मधेश, संकटकालिन अवस्थामा घेरिएको छ देश, उठ युवाहरु अब केही त गर्नु पर्‍यो, हिमाल पहाड, तराईमा शान्ति सन्देश छर्नुपर्‍यो ।
राजनीतिक दल देशमा द्वन्द्व नबढाओ । दिनभरी मजदुरी गरेर खाने हामी गरिब नागरिकलाई हातमुख जोर्न गाह्रो भयो । सबै मिल अनि नेपालको स्वाभिमानलाई बचाओ ।
मधेसी नेताले प्रमुख ३ दलका नेतालाई संबिधानसभाको प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भन्ने उता प्रकिया रोक्दा पनि वार्तामा चाहिँ बसेनन् ! आफूहरुले आन्दोलन पनि नरोक्ने वार्तामा बस्न पनि नखोज्ने ! किन मेरै गोरुको बारै टक्का भने जस्तो गरेको ?
नेपाल बहुजाति र बहुभाषी देश भएकाले संघीयताको मुल सम्बन्ध राज्यको हरेक निकायमा सम्पूर्ण जातजातिको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व होइन र ?
संघीयताको नाममा कहिलेसम्म आन्दोलन गरिरहने ? त्यसैले नेपालीहरुले अहिले आफनो मात्रै स्वार्थ हेर्नुभन्दा एकजुट भएर सबैको हितका लागि आवाज उठाउँ
दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गर्ने दलहरुले नागरिकको सुझाव लिन दुई दिको समय छुट्याए । भौगोलिक विकटताले सबैको सुझाव ल्याउन सकिँदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि सुझाव लिन्छौं भन्नु नाटक मात्रै हो ।
म मधेसी हुँ तर पनि नेपाली हुँ । अव बन्ने संविधानमा म जस्ता नेपालीलाई मधेसी भनेर नछुट्याइयोस ।
शम्भूकुमार मण्डल, ​मोरङ्ग
मलाई भुकम्प पीडितका लागि सरकारले जति ध्यान हुनुपर्ने त्यति दिए जस्तो लागेन । यदी ध्यान दिएको भए पीडितलाई कुहिएको चामल कसरी बाँडिन्थ्यो ?
सहयोग त आयो तर यो पनि त्रिपाल जस्तै त हुने हो कि । त्यसैले खवरदार फेरि पनि भोट चाहिन्छ भने सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ अर्थात सबै खर्च विवरण देखाउनुपर्छ ।
अरुसँग हात पसारेर सम्मेलन गर्नु मात्रै त होला नी । सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने, न योजना छ, न त बुद्धि नै ।
१६ बुँदे सहमति त शीर्ष नेताले भन्दा पनि भुकम्पले गरेको हो । नेताले त यतिका महिनासम्म पनि सहमति गर्न सकेकै थिएनन नी । भुइँचालो आएपछि भने एकाएक सहमति भयो ।
सुनिन्छ त्रिपाल त धेरै सहयोग आएको छ भनेर तर भूकम्प पीडितले किन पाएनन् ? यस्तै राजनीतिक खिचातानी हुने हो भने विदेशीले देश नै खोस्न बेर छैन । यस्तो परिस्थीतिमा फुटेर होइन जुटेर लागौं , आफ्नै पेट भर्न होइन पीडितको पेट भरौं ।
विष्णु चौधरी, कञ्चनपुर
सत्ताका लागि संविधानलाई माध्यम बनाएर भइरहेको दलहरुबिचको विवाद कहिलेसम्म ? यसले युवाको रोजगारीको बाटो मात्रै बन्द भएन उनीहरुलाई विदेश जान बाध्य पनि बनाएको छ ।
पछिल्लो समय बलात्कार र हिंसाका घटना अबोध बालबालिका र असक्त, अपाङ्ग महिलाहरु माथि बढि हुने गरेका छन् । अपराधिलाई दिने प्रश्रय पनि हाम्रो समाजमा यस्ता कुकृत्यका घटना बढ्नुको मुख्य कारण रहेको छ । यसले राम्रो संकेत गर्दैन ।
ग्रेस गौतम, पाल्पा रामपुर
मानव अधिकार भनेको के त ? नेशनल मेडिकल कलेज बिरगंजमा भर्ना भएका बिरामीहरुको अवस्था, गतिबिधीबारे सोधपुछ गर्न, जाँच गर्न डाक्टर नआएको तीन दिन भइसक्यो । यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस ।
सहवुद्दिन अन्सारी, बारा
हामी नेपालीले कतिसम्म पर्खिन सक्छौं ? नेताहरुको चाला देख्दा लाग्छ अब संविधान बन्नु र देशको विकास हुनु भनेको गोरु ब्याउनु जस्तै हो ।
उमेश मिश्र, पाँचथर
बुद्ध जन्मिएका र शान्ति भूमिका रुपमा परिचित मेरो देश, बुद्धुहरुको देशमा रुपान्तरित हुँदैछ । कृषि प्रधान भनेर चिनिने मेरो देश कुर्सी प्रधान देशको रुपमा चर्चित बन्दैछ ।
मुना धनञ्जय, नवलपरासी
अख्तियारले अहिलेसम्म सानाले गरेको भ्रष्टचार मात्रै देख्यो त्यसैले अव ठूला भ्रष्टचारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याओस ।
इश्वरी पाण्डे, ठूलो पोखरा, अर्घाखाँची
नागरिकले दुई तिहाई मत दिएर संबिधान बनाउन पठाएको कांगेस र एमाले एकीकृत नेकपा माओवादीको अगाडि चुँ बोल्न पनि सकेनन ।
होम गौतम, चन्द्रनिगाहपुर रौतहट